Golaha Shacabka oo maanta Aqriska Koowaad mariyey Miisaaniyadda 2019-ka – Kalfadhi
Golaha Shacabka oo maanta Aqriska Koowaad mariyey Miisaaniyadda 2019-ka
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, ayaa sheegey in dakhliga ay dowladdu ku tashan doonto uu yahay kan gudaha oo kaliya. Waxa uu ka hor hadlayey maanta Golaha Shacabka, oo uu hor geeyey Miisaaniyadda Dowladda ee 2019-ka, si ay u mariyaan Aqriska Koowaad.
Waxa uu Golaha hortooda isku barbardhigay Miisaaniyadda sanadkan sii dhamaanaya iyo Miisaaniyadda sanadka soo socda, ee hor taala Golaha, isagoo muujinaya in ay Miisaaniyaddii 2018-ka ku korortay $66,000,000. Arrintaas ayuu sheegay inuu ku faraxsan yahay, ka Wasiir ahaan.
Dakhliga gudaha ee uu ka hadlayo Wasiirku, waxa uu sheegay inuu ka imaanayo Muqdisho iyo hareeraheeda. Hase ahaatee, waxa uu muujiyey rajo ah in ay heli doonaan 30-ka milyan ee Doolar ee uu Turkigu siiyo Soomaaliya, isagoo xusaya inuu jiro culeysyo haysta Turkiga, oo ka jira gudaha dalkaas.
Dakhliga Soomaaliya soo gala waa saddex qaab: mid ka yimaada canshuuraha, lacagaha kabka ah ee nooga yimaada dalalka saaxiibka la ah Soomaaliya iyo dakhliga mashaariicda. Dakhliga kaliya ee lagu tashan karo waa kan ka yimaada Muqdisho iyo hareeraheeda” ayuu yiri Wasiir Beyle.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Beene Beene ayaa weydiiyey Wasiirka Maaliyadda halka ay martay Miisaaniyaddii 2018-ka, inta aan la ansixinta tan sanadka soo socda. “Waa nasiib darro in la keeno Miisaaniyadda 2019-ka, xili aysan cadeyn Miisaaniyaddii ka horeysay” ayuu yiri Xildhibaan Beene Beene.
Xildhibaan Cabdirashiid Xidig ayaa la wadaagay Golaha in Miisaaniyadda 2019-ka ay ka maqan yihiin Dowlad Goboleedyada Jubbaland, Puntland iyo Somaliland. “Miisaaniyadda waxaa ku xusan lacag la siiyey maamulada Hirshabeele, Galmudug iyo Koofur Galbeed. Maxaa loogu qori waayey Puntland, Jubbaland iyo Somaliland?” ayuu Xidig ku yiri Wasiirka Maaliyadda, Cabdiraxmaan Beyle.
Beyle dib uguma soo noqon Makaroofanka, siyuu uga jawaabo su’aalaha ay Xildhibaanadu weydiiyeen, waxaana Guddoomiye Kuxigeenka 1–aad ee Golaha Shacabka, Cabdiwali Ibraahim Muuddey, uu amray in la guda galo qodobka kale ee ajandaha Golaha, “maxaayeelay” buu yiri “Miisaaniyadda 2019-ka waa aqris koowaad ee soo aqrista Xildhibaano”.
Sida uu ku doodayo Xildhibaan Beene Beene, waxa uu Wasiirka Maaliyadda Markasta hor yimaadaa Golaha, isaga oo raba inuu si degdeg ah Goluhu wax ugu meel mariyo. “Wasiirku waxa uu keenaa Miisaaniyadda xili gaba-gaba ah, waxa uuna sheegaa inuu deg deg jiro, oo lacagtii ciidanka ay bixin lahaayeen. Aniga waxaan u sheegaa shacabka inaan u codeyn doonin Miisaaniyaddaas” ayuu yiri Beene Beene.
Senatar Xuseen Sh. Maxamuud: Dalka Waa Laga Gorgortamay
Baarlamaanka Koofur Galbeed oo dhisay guddi doorasho oo cusub